Notohizan’i Shanghai ny fihibohana na dia mitaraina, lany vatsy sy mikorontana aza ny vahoaka, · Global Voices teny Malagasy
Betsaka kokoa ny matin'ny fihibohana noho ny matin'ny COVID
Voadika ny 12 Avrily 2022 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, srpski, Português, English
Vata fampangatsiahana babangoana napetraka teo an-davarangana ho fanoherana ny tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fihibohana.
Nitarina mandritra ny fotoana tsy voafetra mandra-pifehezana ny fiparitahan'ny Omicron farany indrindra ny fihibohan’ny olona miisa 26 tapitrisa ao Shanghai.
Nambara tamin'ny 27 martsa ny fihibohana dingana faha-2 manerana ny tanàndehibe ary tokony nifarana tamin'ny 5 aprily. Nitombo anefa ny isan'ny tranga voamarina ary nahatratra 17.077 ny tranga voarakitra tamin'ny daty farany voatondro ary nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra ao an-tanàndehibe fa hanao andiana fitiliana hafa, nanantena ny hanafoana ny fiparitahana eo ambanin'ny politika zero-COVID.
Mandritra izany fotoana izany, ao ambadiky ny hitamaso, ao anatin’ny fisavorovoroana ilay tanàndehibe satria maro ny mponina ao anatin’ny fihibohana no lany sakafo, tsy mahazo fikarakarana ara-pahasalamana mahazatra, ary sahirana amin'ny fividianana entana ilaina andavanandro, araka ny tatitra farany avy amin'ny Human Rights Watch.
Na izany aza, voasivana ao amin'ny tambajotra sosialy sy eny amin'ny arabe mangadihady ny savorovoro, araka ny nanehoan'ilay profesora momba ny media, Weixian Pan, azy hoe:
The romanticized mediation of the empty, quiet Shanghai erased the busy logistical/medical workers roaming through the city, and dismissed how messy and chaotic this moment really is. The city is now permeated with rage, exhaustion, and disappointment from the people. #lockdown https://t.co/Ab6W63wqz4
— Weixian Pan (@hannah_panpo) April 6, 2022
Voafafan'ireo mpiasa mpampitao/-pitsaboana nivezivezy eran’ ny tanàna ny fanelanelanana mampanonofy ao Shanghai mangadihady sy mangina, ary tsy mahita ny fikorontanana sy ny fisavorovoroana tokoa amin’ity fotoana ity. Feno hatezerana sy faharerahana ary fahadisoam-panantenana avy amin’ny vahoaka ilay tanàndehibe ankehitriny.
Fikorontanana amin'ny fahazoana sakafo
Nanakorontana ny fampitaovana tao an-tanàna izay manampy ny mponina miisa 26 tapitrisa ao Shanghai amin'ny filany fototra ny fihibohana. Noho izany, maro no mitaraina amin'ny tambajotra sosialy fa mosarena, tsy afaka mandeha any amin'ny toeram-pivarotana ary tsy mahazo sakafo sahaza, navela ho lo eny an-dalambe ny legioma sy ny sakafo nefa tsy misy fitaovana/fomba fiasa matotra hanaterana izany.
Any amin'ny ivon-toeram-pitsaboana sasany ho an'ny marary tsy misy soritr’aretina, tsy ampy ny mpiasa mizara sakafo sy kojakoja, ka tsy maintsy miady ho an'ny tenany ny olona. Ity ambany ity ny horonantsary nozarain'ilay mpanao sariitatra politika Rebel Pepper mampiseho ny savorovoro tao amin'ny iray amin'ireo toby fitokana-monina any atsinanan'i Shanghai:
— 变态辣椒RebelPepper (@remonwangxt) April 4, 2022
Toerana fanokanan-toerana ao amin'ny toeram-pianarana nilaozana ao amin'ny distrikan'i Nanhui any atsinanan'i Shanghai. Tsy nisy olona nitantana ny vatsy. Navela teny an-kalamanjana ny sakafo naterina ho alain’ny olona.
Nihabetsaka ny fifandonana nitranga rehefa niezaka nandositra ny fihibohana tao amin’ny distrika ny mponina mba hitady sakafo. Nizara lahatsary nalaina tao amin'ny iray amin'ireo faritra nisy fifandonana i Rebel Pepper:
— 变态辣椒RebelPepper (@remonwangxt) April 6, 2022
Ao amin'ny faritra misy ny toeram-ponenana ao Shanghai, rotaka. Ny fitarainana feno fahakiviana no hany henoko hoe “Maty mosary izahay!” Tsy nampoiziko mihitsy fa hisy krizy tahaka izao eto Shanghai. Nanara-maso ireo lahatsary voasivana avy any Shanghai aho. Aza mijery fotsiny raha tsy mahazaka ianao.
Fahafatesana tsy misy hifandraisany amin'ny COVID
Hatramin'ny fotoana nanoratana, nilaza ny manampahefana fa tsy nisy ny fahafatesana vokatry ny COVID tamin'ny onjan'ny valan'aretina any Shanghai ankehitriny, saingy toa mifanohitra amin'izany ny porofo.
Mampiseho izany ny tatitra voasivana avy amin'ny Caixin fa beantitra miisa 20 no maty tao amin'ny tobim-pitsaboana any Shanghai tamin'ny onjan'ny valan'aretina ankehitriny. Fantatra fa tratran’ny COVID-19 ny mpiasa sasany sy ny zokiolona tao amin'ny tobim-pitsaboana.
Nilaza tamin'ny tranokalam-baovao mpanao fanadihadiana, Initium, ny dokotera miasa eny ifotony any Shanghai fa nihoatra ny isan’ny maty vokatry ny COVID ny isan'ny maty tsy vokatry ny COVID satria tsy ampy ny mpiasan'ny fahasalamana miasa ao amin’ny hopitaly izay na tratran’ny fihibohana na netsehina hanao fitiliana COVID maneran-tany. Ankoatra izay, tsy mandray ireo marary mila fikarakarana maika ny hopitaly sasany satria tsy nahitana fitiliana PCR miiba tao anatin’ny 24 ora izy ireo.
Nanangona fitarainana maro tsy voamarina momba ny fahafatesan'olona tsy mifandraika amin'ny COVID mivezivezy ao amin'ny WeChat ilay bilaogera Shinoa @fangshimin:
— 方舟子 (@fangshimin) April 3, 2022
Toy ny helo an-tany Shanghai ankehitriny. Nisy mpiasan’ny Beckman [orinasa mpivarotra ambongadiny] 40 taona maty noho ny fihetsehan’ny aretim-po satria tsy nety namonjy azy ireo ny hopitaly raha tsy atao fitiliana PCR izy. Mpianatra maintimolaly tao amin’ny oniversiten’i Tsinghua roa no maty satria tsy nisy nanadio ny tendan’izy ireo rehefa avy nodidiana. Tovolahy iray 24 taona no maty noho ny aretin’ny sarakaty vokatry ny fanemorana maika ny fitsaboana azy. Zaza kely 2 taona no maty nandritra ny fihibohana, namono tena ny reniny.
Vao maika tezitra ny vahoaka satria nosarahina tamin’ny ray aman-dreniny ny ankizy noho ny fandaminana sasany natao tamin’ny fanokana-monina, izay nandika ny Fifanarahan’ny Firenena Mikambana Momba ny Zon’ny Ankizy. Ity ambany ity ny horonantsary niparitaka be mampiseho fa tsy nahazo fikarakarana araka ny tokony ho izy ireo ankizy tratran'ny fanokana-monina:
The extreme “COVID Zero” policy in #Shanghai is more dangerous than the virus itself. 200 children are separated from their parents without their consent. There are only 10 nurses taking care of those children.#ccppropaganda#CCP_is_terrorist pic.twitter.com/FzjjO7V5Rs
— HKDemocracyNow (@hkdnow1) April 7, 2022
Mampidi-doza kokoa noho ilay viriosy ny politika tafahoatra “COVID Zero” eto #Shanghai. Ankizy miisa 200 no tafasaraka amin’ny ray aman-dreniny tsy nahazoana fankatoavana amin’izy ireo. Infirmiera miisa 10 ihany no mikarakara ireo zaza ireo.
Farany, nanao fileferana ny manam-pahefana tamin'ny 4 aprily.
Na dia eo aza ny fitomboan'ny fahasosorana, tsy misy famantarana fa hifarana tsy ho ela ny fihibohana mahery vaika, farafahakeliny mandrapaha-voafehy ny fiparitahan’ny valan’aretina. Mpiasa mihoatra ny 10.000, anisan'izany ny miaramila avy amin'ny Tafi-Panafaham-Bahoaka, no nalefa any amin'ny faritany hafa any Shanghai mba hanolo-tanana amin'ny fihibohana.
Drones sy alika raboto hita nivezivezy tao amin'ny tanàndehibe mangadihady mandrisika ny olona hanaraka ny fameperana:
Araka ny hita ao amin'ny Weibo: Eny an-davarangana ny mponin'i Shanghai mihira sy manohitra ny tsy fahampian'ny famatsiana. Nipoitra ny drone: “Azafady, araho ny fepetra famerana amin’ny covid. Fehezo ny fanirianao hahazo fahafahana. Aza manokatra varavarankely na mihira.
Raboto mandehandeha eny an-dalambe manao fanambaraàna momba ny fahasalamana ao #Shanghai mandritra ny fihibohana.
Mbola voasivana ihany ny fanakianana mafy momba ny politikan'ny governemanta na dia nanala ny sivany tamin'ny hafatry ny olona tsirairay miantso vonjy aza ny sehatry ny tambajotra sosialy. Ity ny vazivazy malaza indrindra nivezivezy tao amin'ny Weibo tato anatin'ny herinandro vitsivitsy:
Ny distrikan'ny fanehoan-kevitra [fizarana] no distrika tsara tantana indrindra eto Shanghai